Fiaingana vaovao ho an'ny Fanabeazana katolika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Aoka ny rariny hikoriana... il y a 44 minutes
“ FIAINGANA VAOVAO HO AN’NY FANABEAZANA KATOLIKA MANORINA TONTOLO IAINANA
MAMPIVELATRA NY MAHA OLONA MANONTOLO SY NY OLON-DREHETRA.”
(Nouveau départ pour l’Education Catholique vers une écologie intégrale)
“Raha tsy ny Tompo no manorina ny trano, miasa foana izay manorina azy”.(Salamo 127)
Ho antsika ankohonam-panabeazana : Ray aman-dreny, Mpanabe, Mpampianatra, Mpianatra...
Reny sy mpampianatra ny Eglizy
Vaindohan-draharahan’ny Fanabeazana Katolika eto Madagasikara ny manomana olom-banona ho an’ny Firenena sy ny Eglizy amin’ny lafiny rehetra. Noho izany, ireo tanora beazina dia tsy ho vesatra ho an’ny firenena intsony fa ho olona afaka hiantsehatra hitondra fampivoarana eo anivon’ny fiarahamonina manoloana ny fivoaran’ny fanatontoloana. Mikaroka hatrany izay hanatsara ny kalitaom-panabeazana omeny noho izany ny Sekoly katolika, tsy amin’ny fahaiza-manao sy ny fahalalana fotsiny ihany, fa eo indrindra ny fanomezan-danja ireo toetra amam-pihetsika ary soatoavina takian’ny fahaiza-miaina sy ny finoana latsa-paka.
Ankasitrahana an’Andriamatoa Filoha ny fanentanana ny fanabeazana maimaimpoana izay efa voasoratra ao amin’ny Lalam-panorenana and. 24 manao hoe : “ Mandamina ny fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra ”.
Raha ny olana misy ankehitriny no iaingana dia maro tokoa ny azo tantaraina sy resahana etoana. Santionany amin’izany ny fahasahiranan’ireo mpanabe amin’ny fikarakarana ireo zaza malagasy te hianatra raha nandre ny fanentanan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika fa maimaim-poana ny fanabeazana, tsapa araka izany fa mahantra tokoa ny olona ka mitady ny fomba rehetra hampihenana ny fandaniana ao antokantrano. Toa fahadisoam-panantenana anefa no hita satria mitombo ny isan’ny mpianatra ary maro ireo avy amin’ny sekoly tsy miankina any ambanivohitra any no namonjy ny sekolim-panjakana nefa ny foto-drafitr’asa tsy ampy. Mijaly ny mpampianatra noho izay hamaroan’ny mpianatra izay. Tsy vitsy koa anefa ireo mandondom-baravarana ny hiverina aty amin’ny sekoly katolika raha nandre fa amin’ny telo volana voalohany ihany no tsy mitaky vola amin’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra. Hita araka izany fa avezivezin’ny fahantrana ny olona.
Fandaharam-pianarana mitondra mankaiza ?
Ny fandaharam-pianarana vaovao ihany koa dia mametraka olana goavana na teo amin’ny fomba nandrafetana azy, na teo amin’ny fikaonan-dohan’ireo teknisianina izay mahatsapa fa zary amboletra hatrany hatrany ny firosoana amin’ny teti-pivoaran’ny Fanabeazana. Raha ny tokony ho izy dia atomboka hatrany ifotony ny famolavolana ny fandaharam-pianarana, nefa tsy izany no nitranga. Tsy ny tafo no atao raha manorina trano fa ny fototra aloha. Voalaza ihany koa ankehitriny fa hidina any antsekoly mba hanadihady ireo mpampianatra mikasika ny fandaharam-pianarana vaovao ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Ministera, nefa izany dia tsy mbola nisy fifampidinihana niarahana tamin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny Fanabeazana. Naniry ahita izany izahay aty amin’ny foiben’ny fampianarana tsy miankina kanefa dia nodinganina avy hatrany ka ny mpampianatra any antsekoly no niantefany. Ny fandaharam-pianarana amin’ny lisea moa dia mbola miteraka adihevitra be nefa dia hirosoana hatrany hatrany. Misy ireo sekoly hanaovana fanandramana nefa ny mpampianatra tsy nahazo fiofanana? Tsy misy mpampianatra vonona amin’ny fampianarana ireo taranja vaovao.
Mahalasa eritreritra ihany koa ny mahita ireo mpianatra afaka Baccalauéat nefa tsy mahita haleha, nanampy trotraka izany ny vokatry ny valanaretina Covid 19 izay nampikorontana ny fandaminana rehetra. Samy mandondom-baravarana ao amin’ny Université avokoa na ireo mpianatra afaka bacc tamin’ny herintaona, na ireo mpianatra afaka bacc tamin’ity taona ity, na ireo mpianatra efa tafiditra amin’ny Université nefa tsy afa-nianatra. Vao mainka ihany koa lasa olana saro-bahana ny tsy fahitan’izy ireo asa na zavatra hatao hiatrehana ny fiainana. Araka izany tsy misy PSE (Plan Sectoriel de l’Education) mitondra amin’ny fivoarana ny mahaolona manontolo raha tsy voapetraka ny profils de sortie isaky ny fin de cycle.
Ireo ahiahy manoloana ny PSE ? Aoka haka lesona avy amin’ny lasa
Ny fijoroana amin’ny maha-izy azy amin’ny Fanabeazana katolika dia manentana antsika ho vonona amin’ny fanavaozana sy fanatsarana ny rafi-pampianarana mitondra amin’ny « Kalitaon’ny fanabeazana mahomby ho an’ny daholobe ». Takian’ny fiovam-penitra mahery vaika ny fananana safidy matotra ary koa ny fahasahiana handray « Fiaingana Vaovao » anatin’ny fahamalinana tanteraka mba hisorohana ny mety hiverenan’izay hadisoana nahasolafaka teo aloha. Ilaina hazava sy hipetraka tsara izay vokatra andrasana amin’ireo beazina isaka ny mahavita dingana iray izy ireo. Rafi-panabeazana nohavaozina sahaza sy mendrika ny tanora malagasy no andrandraina mba hanomana olom-pirenena vanona ary tsy ho mena-mitaha amin’ny any ivelany.
Fanabeazana manaram-penitra (ODD 4)
Voalaza ombieny ombieny fa ireo mpiombona antoka rehetra miantsehatra eo amin’ny fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana dia mpandray anjara amin’ilay iraka masina ankinina amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Izany indrindra no manentana ny Fanabeazana katolika hitaky hatrany ny fifampidinihana sy ny fifampiresahana mialoha ny fampiharana tanteraka ny PSE (Plan Sectoriel de l’Education). Sanatria tsy manohitra ny fanovana sy ny fanavaozana isika fa mametraka ahiahy kosa amin’ny fomba hahatrarana ilay tanjon’ny dingam-pivoaran’ny Fanabeazana dia ny ODD n°4 (Objectif pour le Développement Durable ) : “Education de qualité, accessible à tous”.
Tsy azo lavina fa ny fihazakazaky ny teknolojia sy ny fiofoana ara-tsosialy maneran-tany dia mitaky rafi-panabeazana mihavao takian’ny fivelaran’ireo beazina amin’ny maha-olona feno azy. Mitaky fanatsarana ny fandaharam-pianarana izany ; aoka kosa hialàna ny fandikàna be fahatany izay ataon’ny any ivelany ka hanaovana tian-kano tsy tian-kano ny fanavaozana.
Maro ireo tolokevitra efa naroson’ny Fanabeazana katolika hiaraha-mikaroka izay mety ho fanatsarana azo atao. Singa maromaro no voakasik’izany : eo ny fomba fiasa hanajana ny fiaraha-miombon’antoky ny miankina sy ny tsy miankina amin’ny fiatrehana ny fanavaozana, ny rafi-pandaminana ny dingam-pibeazana isan’ambaratonga, ny famolavolana ny teny enti-mampianatra sy ny fandaharam-pianarana, ny fiofanana ho an’ny mpampianatra, ny tetika amam-paika hoenti-mampianatra, ny fotoam-pialan-tsasatra. Koa mba ahatratrarana ny tanjona dia tena ilaina ny fifampihainoana mikasika ireo singa ireo. Antenaina mba tsy ho zary antso an’efitra ihany izany rehetra izany.
Irina tokoa ireo ambara ho fikaonan-doham-pirenena mba hahitana taratra izay tena filàna eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ka tsy ny tontolo an-tanan-dehibe ihany no ho voasahana, fa ao ihany koa ireo sekoly any ambanivolo lavitra any. Ankoatra izany dia antenaina fa ho hitan’ny Fanjakana ilay olana goavana mikasika ny foto-drafitr’asa hiatrehana ny fanovàna mety hatao. Etsy ankilan’izany, azo lazaina fa famonoana an-kitsirano ny Sekoly tsy miankina izay hevitra rehetra atao hanafoanana ireo fanampiana ara-bola ho azy ireo izay efa notanterahan’ny Fanjakana hatramin’izay. Ireny fanampiana ireny no anehoan’ny Fanjakana fa zaza malagasy ihany koa no beazina any amin’ny sekoly tsy miankina, ary iaraha-mahalala amin’izao fotoana izao fa tsy vitan’ny Fanjakana samirery ny Fanabeazana eto amin’ny firenentsika. Eo anatrehan’izany dia tsara raha mieritreritra dieny izao ny fizakan-tenantsika amin’ny fampandehanan-draharaha isika.
Inona ary no ho entin’ny Fiaingana Vaovao ?
Tsy ho lany andro amin’ny fandinihana nefa isika fa tsy maintsy misafidy, amin’ny lafiny maro, indrindra fa amin’izao fotoana aorian’ny fiatrehana ny valanaretina Covid 19 izao. Nitondra fikorontanana eo amin’izao tontolo izao tokoa io valan’aretina io. Mila “ Fiaingana Vaovao ” (nouveau départ) isika eo amin’ny lafiny maha olona manontolo, izay tsy ahafahantsika miolonolona samirery satria ezaka iombonantsika amin’izao tontolo izao. Amin’izany indrindra no amaliantsika ilay hafatry ny Papa Ray Masina tao amin’ny encyclique “fratelli tutti” sy izay lazainy tamin’ny fampianarana nataony isaky ny alarobia tamin’ny aogositra sy septambra : « Sao sanatria efa tara...na miaraka avotra isika ka tafavoaka miatrika izao coronavirus izao satria miara-mifampitsimbina...na miara-rendrika satria samy mandeha samy mitady… »
Anisan’ny fifampitsimbinan’ny zanak’olombelona ny fikajiana ny tontolo iainana. Araka ny tsapa dia « mihetraketraka amin’ny zavaboaary » isika olombelona. Eo ireo fitrandrahana tsy voalanjalanja ireo singa tolo-janahary ; eo ny tsy fiarovana ny tontolo iainana, toy ny doro tanety izay ambarantsika ka nahatonga anay ato amin’ny sekoly katolika manambara hoe : “izay mandoro tanety mamono taraka ary izay mamboly hazo manome aina”. Fanamby lehibe najorontsika anivon’ny sekoly rehetra manerana ny nosy ny ezaka fambolen-kazo izay azo itarafana ny fahaizana amam-pahalalan’ireo beazina ; satria « ny olon-kendry sy mahay dia tsy maintsy tia ny zavaboaary ».
Ny firaisankinan’ny Sekoly Katolika
Manana adidy hisokatra amin’ny hafa hatrany ny fijerin’izay rehetra voafehin’ny tontolom-panabeazana katolika ; iarahantsika mahafantatra ny fahoriana mianjady amin’ireo rahalahy sy anabavintsika any atsimon’ny Nosy. Ontsa ny fo mieritreritra ny fahoriana mianjady amin’izy ireo : ny rano tsy misy, zara raha mahita izay harapaka, ny hery ho enti-miasa sy ho enti-mianatra dia tena am-bivitra… hany ka zary miraviravy tanana ny rehetra. Tsy kabary politika no andrasan’izy ireo, tsy ronono an-tavy lava izao, fa tolo-tanana avy amintsika tsirairay. Eto indrindra àry no anentanana ny Sekoly katolika rehetra manerana ny Nosy : hitondra vonjy ho azy ireo isika !
Eto ampamaranana dia I Kristy no fenitra ho an’ny rehetra. Meteza àry isika hanana fijery miombona amin’ny an’ilay Tompon’ny aina ka hampihatra izany am-pitiavana eo amin’izay sehatra rehetra misy antsika. « Tsy misy aina afa-mivelatra tsy anivon’ny fitiavana ! ». Koa miantefa amintsika rehetra tompon’andrikitra amin’ny Fanabeazana katolika àry ny fampirisihana ho amin’ny fahombiazan’ity taom-pianarana vaovao ity, ary ny irariana dia ny mba ho lavitry ny aretina sy ny korontana isika mianakavy eo ampandraisana ny andraikitra ankinin’ny Eglizy amintsika.
“Raha tsy ny Tompo tokoa no manorina ny trano, miasa foana izay manorina azy”.(Salamo 127)
Ankinintsika amin’Andriamanitra miaraka amin’i Masina Maria ilay Reny mpanabe voalohany sady mpiaro voalohany an’i Madagasikara ary ireo Olomasina sy Olontsambatra malagasy izao ezaka ataontsika izao.
Antananarivo, faha 27 novambra 2020
Fahatsiarovana an’i Masina Maria hajaina amin’ny meday mahagaga.
Ny Filohan’ny Vaomieran’ny Eveka misahana ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika
Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc, Arsevekan’Antsiranana
Révérend Père RAKOTOARISOA Jean Claude, Sekretera Jeneraly
Père RANAIVOSON Jules
Fanambaran'ny FFKM : Aoka ny rariny hikoriana... - il y a 44 minutes